I Solenoid (kagesi) valve kuyinto ephawulekayo ukuthi zingalawulwa nge yezinzwa eduze izintambo. Isikhathi Ukusabela lingaphansi kwesigamu sesibili, okuvumela ukuba usebenzise amadivaysi ezifana ngesivinini ipayipi ngokuzenzakalela valve eziqhutshwa izinzwa okuwuphawu. Kodwa ngaphezu kwakho konke pogovormi okuncane mayelana ukwakheka kanye Umgomo we operation.
valve Solenoid ukwakha umzimba zethusi nge isiteshi kanye Solenoid letinalokubalulekile ihlukaniswe ngesimo induku fixed kanye stem ebiyelwe a se uphawu. Kugcine ixhuma ulwelwesi ngokusebenzisa plunger. Ipheya iziphethu ulungisa olubushelelezi wengxenye ezihambayo. I plunger ngokuvamile unikezwe i wazalela Axial nge protochinkoy lateral. It evens out ingcindezi ayisukumele ulwelwesi nhlangothi zombili. Ngenxa yalokho, valve Solenoid sekuqalile umzamo okungenani kusukela ivulekele avaliwe futhi okuphambene nalokho. I Solenoid is screwed ku izindlu nge ring ukubekwa uphawu emhlabeni azungezwe yayo. Ulwelwesi oba ngesikhathi esifanayo esihlalweni ezakhiwe uketshezi ukugeleza siteshi. Ingxenye engenhla core yakhiwa isici esinqunyiwe kanye ifakwe ukuvikela ikhoyili. Lokhu kuyadingeka ukuthuthukisa izakhiwo yasendle kagesi esikhaleni sangaphakathi emikhonweni nokuvimbela vibration uma iphakelwa kushintshana kudivayisi zamanje.
Kubonakala sengathi wonke umuntu hum ajwayelekile komugqa izintambo ukudluliswa - lokhu kuwumphumela kunyakaza kubangelwa voltage kushintshana. Iphaseji ulwelwesi ligamanxa ne armature wengxenye ezihambayo core Solenoid - ikhoyili wire. Esimweni esejwayelekile for ukudlula okusamanzi kungenzeka khulula noma ingase ivinjwe. Kuye lokhu, valve Solenoid kungaba:
Esimweni esejwayelekile kuleli cala - original esinjengalesi lapho ingcindezi yangaphandle engekho. Umnyombo ukukhiya is eliqhutshwa i kagesi enikeziwe lekhoyili yangaphandle emazombezombe. Uma electrode enikeziwe ukulawula voltage, induku zensimbi ezixhunywe diaphragm, kuholela kube isinyathelo. Khona-ke indlela ukugeleza uketshezi ngokusebenzisa valve ivinjelwe noma kuvulwe. Ngokushesha njengoba isiginali zangaphandle ubalekela, uhlelo uphindela esimweni saso sokuqala.
valve Solenoid, isimiso kabani yokusebenza kusekelwe nenye okokufaka ezimbili nokusakazwa ibe okukhipha olulodwa noma ukuthunjwa ukusakaza itheku has enethiwekhi engaphezu kwemibili yokuxhuma amapayipi.
Kuye inani ukuqala kanye Imiphumela onobuhle ezahlukene:
Uma uhlobo lokuqala yenzelwe ngqo ukusebenza njengoba valve livaleke-off, nokulungiswa eziyinkimbinkimbi ongaxazulula imisebenzi ethize kakhulu. Esimeni kwemibandela ethile esiqeshini ukusakaza yehla legatsha. Noma eyenziwa ukuxuba kokusakazwa ezimbili ngezabelo ezithile. Ezintathu valve Solenoid ingasetshenziswa silondoloze lokushisa oyifunayo ngamanzi ashisayo noma Ukushisa wesifunda. Ngezinye liphezulu kakhulu izinga lokushisa lamanzi kubhayela ngokusebenzisa traffic ivinjelwe. Ngakolunye uhlangothi, ukwehlisa izinga lokushisa ngezansi iphuzu isethi kuzoholela yokuthi omningi abaseGibithe bayakunengwa ngukuphuza amanzi ngempela sishiswa ngakho.
Fire Foam: izici futhi izicelo
PVA glue: izici eziyinhloko nezinhlobo
Overlock ekhaya lokuthunga: tinkhulumo, izici, ukumisa, ukubuyekezwa
Amafomu Tax ngoba SP
Stupor - siyini lesi imithi?